Ny morontsiraka tsara indrindra any Costa Rica | Vaovao momba ny dia
Ranomasina sy ranomasina | | Costa Rica, tora-pasika
Costa Rica dia manana morontsiraka mihoatra ny arivo kilometatra mitazana ny Pasifika. Ny morontsiraka miaraka amin'ny hazo rofia sy ny voanio, ny hantsana, ny peninsulas kely ary ny zohy tsy hay hadinoina dia sasany amin'ireo manintona lehibe hita ao amin'io zaridaina paradisa io. Sary tropikaly izay sarotra ampitahaina amin'ny vazan-tany hafa.
Amin'ny lafiny Karaiba, ity firenena ity dia manana morontsiraka mihoatra ny 200 kilometatra, tototry ny zava-maniry maniry. Tora-pasika virjina ahafahanao mankafy ny rano madio mangarahara sy ny toetrandro, ny gastronomie ary ny filentehan'ny masoandro lalina. Hijery ny morontsiraka sasany tsara indrindra eto amin'ity firenena ity ve isika?
Voalohany indrindra Tamarindo Beach (Fantatry ny besinimaro fa Tamagringo Beach) no iray amin'ireo toerana fizahan-tany lehibe any Costa Rica. Raha dinihina ny marika malaza omen'izy ireo azy dia mazava fa tsy io no zorony tena misy eto amin'ny firenena, fa io no be olona indrindra. Ny nentim-paharazana dia Tora-pasika mainty, akaikin'i Cahuita, morontsiraka izay araky ny anarany dia fasika mainty mainty. Ny tsy fitoviana amin'ny rano turquoise dia mahatonga an'io toerana io ho iray amin'ireo mahavariana indrindra eto amin'ny firenena.
Mamihina ny tendron'ny saikinosy Nicoya ananantsika ny tanàna roa Firenena ratsy y Santa Teresa. Tsy toerana fitsidihan'ny mpizahatany izy ireo, indrindra fa tsy ny làlana tsara indrindra mankany. Na izany aza, mendrika ny very ao amin'ity traikefa nahafinaritra ity ny hahafantarana ny iray amin'ireo zoro teratany wildest sy most of Costa Rica. Manakaiky an'i Mal País dia Montezuma, paradisan'ny mpanao kitapom-batsy any Nicoya. Raha mitady fizahan-tany amoron-dranomasina milamina sy akaiky ianao dia tsy isalasalana fa ity no toerana tsara indrindra. Kilometatra sy kilometatra amoron-dranomasina izay, matetika, dia foana foana.
Avelako farany ireo torapasika roa tiako indrindra any Costa Rica. Ny voalohany dia Conchal Beach, nomena anarana ho an'ireo akorandriaka kely manarona ny fasika. Ny iray hafa dia Manzanillo, morontsiraka Karaiba roapolo kilaometatra monja miala an'i Montezuma. Eo anilany dia afaka miaina ny rivo-piainana nentim-paharazana sy malaza an'ny Puerto de Talamanca taloha ianao. Ny mipetraka eto ary maheno ny onjan'ny onja dia fahafinaretana lehibe.
Fanazavana fanampiny - Costa Rica
Sary - Vagablonding
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » tora-pasika » Ny morontsiraka tsara indrindra any Costa Rica